Sheekada filimka Viswasam: Ajith Kumar iyo Director Siva waxay la imaadeen fariin heer sare ah – Filimside.net
Sheekada filimka Viswasam: Ajith Kumar iyo Director Siva waxay la imaadeen fariin heer sare ah
Viswasam waa filimka afaraad oo ay ku midoobaan Thala Ajith Kumar iyo Director Siva ayagoo horey u wada sameeyeen aflaana aan daawasho ahaan laga xiiso dhigeyn Veeram (2014), Vedhalam (2015) iyo Vivegam (2017) sidaa darteed filimka Viswasam waxaa looga fadhiyaa inuu noqdo mashruuc heer sare ah madaama aflaan tayo wanaagsan looga bartay Ajith iyo Siva.
Jilaayaasha filimkan: Ajith Kumar, Nayanthara, Jagapathi Babu iyo Anikha.
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 32-daqiiqo
Fariinta Filimka Viswasam Oo Kooban: Thookku Durai (Ajith) wuxuu ku nool yahay tuulada Koduvilarpatti asigoo ah nin qalbi wanaagsan balse awood badan sidoo kalena waqtigiisa ku bixiyo inuu xaliyo murana iyo is qab qabsiga tuuladiisa ka jiro.
Thookku Durai (Ajith) noloshiisa isbadal ayaa ku imaaneyso marka ay tuuladiisa imaado gabadha dhaqtarada ah Niranjana (Nayanthara) oo dadka deegaanka caawineyso. Inkastoo labadan aad u kala duwan yihiin haddana wey is guursanayaan ayadoo Niranjana (Nayanthara) aaminsan tahay inay seygeeda noloshiisa badali karto marka ay lamaane rasmi ah noqdaan.
Balse Niranjana (Nayanthara) qalbi jab ayaa ku dhacaayo marka seygeeda Thookku Durai (Ajith) uu waqtigiisa iyo noloshiisa sidii hore ugu bixiyo xalinta qilaafaadka deegankiisa asigoo reerkiisa waqti u weynayo waxaana soo kala dhex galaayo qoyskan qilaaf sababaayo in Thookku Durai (Ajith) xaaskiisa iyo gabadhiisa ku waayo.
Niranjana (Nayanthara) iyo gabadheeda waxay u guurayaan Mumbai ayagoo ka tagayaan Thookku Durai (Ajith) oo ah nin madax adag oo tiisa kaliya u go’an tahay.
Thookku Durai (Ajith) dadka tuulada iyo reerkiisa ayaa ku boorinayaan inuu Mumbai aado oo uu xaaskiisa iyo gabadhiisa dib ula midoobo noloshaan dhibka badana isaga baxo, wuxuuna soo aadaa Mumbai si uu reerkiisa waqti ula qaato gaar ahaan gabadhiisa oo 10-sano ka hor ugu dambeesay.
Thookku Durai (Ajith) marka uu Mumbai imaado wuxuu ogaanaa in nolosha gabadhiisa halis ku jirto sidoo kalena uu ugaarsano tuuga weyn ee ganacsadaha laga dambeeyo ah Gautham Veer (Jagapathi Babu).
Gautham Veer (Jagapathi Babu) wuxuu gabadha Thookku Durai (Ajith) u raadsanaa asigoo loo sheegay gabadhiisa xanuunsan in caafimaadkeeda uu ku jiro inuu helo gabadha Thookku Durai (Ajith) dhalay oo lagu bad baadin karo sida uu isaga aaminsan yahay.
Haddaba qaybaha dambe filimka Viswasam waxaa loo daawan doonaa sida Thookku Durai (Ajith) uu gabadhiisa u difaacanayo halis walbo oo kusoo wajahay iyo sidii uu xaaskiisa dib ula midobi lahaa.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Viswasam:
Director Siva marka uu heesto Ajith Kumar wuu fahmi karaa fariinta labadooda looga baahan yahay markaana miyiga iyo tuulada ayay ku laabteen waxayna la imaadeen Viswasam oo ay si heer sare ah isugu dheeli tireen dhanka Action-ka, arimaha qoyska, dareenka qiirada badan iyo mada daalada loo baahan yahay.
Viswasam halka saac hore wuu wacan yahay balse halka saac dambe ayuu fariin ahaan heer sare yahay marka Mumbai la isku imaado xiisaha Ajith qoyskiisa ilaashanayo iyo halista joogtada ah soo wajaheyso si heer sare ah ayaa la isugu dheeli tiray.
Inaba caadi ma ahan sida uu Ajith Kumar isaga dhagay nin caadi ah oo aan xarako Superstar-nimo shaashada ku muujineyn iyo sida uu doorkiisa 100% isugu ekeysiiyay. Ajith doorkiisa aabonimo iyo sida uu qoyskiisa ugu nugul yahay ayaa ah arinta ugu weyn qoysaska soo jiidan doonto si la mid ah reerkiisa wax walbo inuu ka difaaco sida uu ugu heelan yahay ayaa ah arin kale oo taageerayaashiisa siweyn usoo jiidan doonto.
Atirishada Nayanthara door adag ayay filimkan ka qaadatay waxayna ku amaanan tahay sida ay kaalinteeda kaga soo baxday iyo is fahanka dheeraadka ah oo ay shaashada ka muujiyeen iyada iyo Ajith Kumar.
Waa cajiib sida Anikha u matashay doorka gabadha yar ee Ajith Kumar aabo u yahay waxaa la dhihi karaa Ajith iyo Nayanthara gabadhan si wacan ayay filimkan ula qeebsatay bandhig ahaan.
Sida caadiga ah Jagapathi Babu doorkiisa laadarka ah kuma niyad jebinaayo waayo halyeegan filimada Tamil iyo Telugu mid walbo uu kasoo muuqdo saameyntiisa ayuu wataa.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka Viswasam:
Bandhiga hogaamiyaasha filimkan oo heer sare ah.
Action-ka, dareenka qiirada badan iyo arimaha qoyska oo si wacan la isugu dheeli tiray.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Viswasam:
Fariintiisa ma ahan wax cusub waa kuwii horey loo arki jiray.
Muusig wacan oo siweyn kuu soo jiidaneyso malahan.
Qiimeynta Filimka Viswasam: 4/5 (Afar Xidig)
Gunaanad: Ajith Kumar iyo Director Siva waxay la imaadeen fariin dhan walbo ka dheeli tiran oo hubaal ahaan qoysaska siweyn usoo jiidan doonto ayadoo xiliga feestada Pongal lagu jiro waa qasab in Viswasam uu ganacsi weyn sameeyo guul weyna gaaro.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Viswasam ee bandhig ahaan Ajith Kumar siweyn loogu amaanay:
Waxaa Aqrisay 766